Barcelona oo badalka Alves ka raadinaysa kooxda Liverpool – Gool FM
Barcelona oo badalka Alves ka raadinaysa kooxda Liverpool
Liibaan Fantastic July 10, 2016
ST ALBANS, ENGLAND - MAY 30: Nathanyle Clyne walks out to training prior to an England training session at London Colney on May 30, 2016 near St Albans, England. (Photo by Michael Regan - The FA/Getty Images)
(Barcelona) 10 Luulyo 2016 Wararka ka imaanaya ingiriiska ayaa sheegaya in kooxda Barcelona oo baadigoobaysa badalka Dani Alves ay diirada saaratay daafaca Liverpool ee Nathaniel Clyne.
Sida laga soo xigtay Sunday Times Barcelona ayaa doonaysa daafaca xulka ingiriiska iyo kooxda Liverpool ee Nathaniel Clyne si uu u buuxiyo booskii uu baneeyay Dani Alves oo dhawaantaan ku biiray Juventus.
Nathaniel Clyne ayaa ka soo dhaqaaqay kooxda Southampton suuqii xaggaaga ee 2015, wuxuuna u saftay kooxdiisa Liverpool 52 kulan taas oo ka dhigtay laacib muhiim u ah kooxda Reds.
25 jirka reer ingiriis ayaa danaynaya inuu isaga tago kooxda Liverpool, kadib markii uu dareemay inuusan ku faraxsanayn Liverpool tan iyo markii uu yimid tababaraha reer German ee Jurgen Klopp.
Shax isku dhaf ah oo laga sameeyey xulalka Portugal iyo France ka hor kulankooda final-ka caawa ee EURO 2016